Siyaasi reer Somalilandna oo fariin u diray Madaxweyne Muuse Biixi kana codsaday inuu xoriyadiisa usoo.. | Salaan Media
Siyaasi reer Somalilandna oo fariin u diray Madaxweyne Muuse Biixi kana codsaday inuu xoriyadiisa usoo..
Farriini waa Qaan, Faqna waa Geed !
Saddexdan Farriimood ayay na soo fareen Jaaliyadaha reer Liverpool iyo Manchester.
1. Waxay na soo fareen inay Duco hawada usoo marinayaan Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi “dabagale” waxaanay codsadeen in Shacab iyo Xukuumadba gacan buuxda la siiyo Taliyaha oo ay tilmaameen in uu dariiq sax ah ku socdo.
2. Waxa ay Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka codsadeen inuu Cafis u fidiyo oo uu Xabsiga ka sii daayo Weriye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ay tilmaameen inuu yahay Samafale dad badan oo masaakiin ah caawin jiray.
3. Waxa ay ka codsadeen Siyaasiyiinta, Salaadiinta iyo qof kasta oo Somalilander ah oo Warbaahinta ka hadlaya inuu u fiirsado hadalada afkiisa ka soo baxaya oo uu ka fogaado qabyaalada, cayda iyo hadalada naxliga leh ee ummada kala fogaynaya.
Saddexdaas Farriimood waxaan rajaynayaa in ay gaadhi doonaan cidii ay ku socoto.